विमान दुर्घटनामा पर्नु अगाडी यस्तो स्ट्याटस लेखेर विदा भइन् सजना …. – पुरा पढ्नुहोस्……
विमान दुर्घटनामा पर्नु अगाडी यस्तो स्ट्याटस लेखेर विदा भइन् सजना ….
हेर्नुहोस उनलेलेखेको status
Prevविमान दुर्घटनामा पर्नु अगाडी यस्तो स्ट्याटस लेखेर विदा भइन् सजना …….
Nextयी भगवान हुन्, धामीले बोक्सी बनाएकी राधालाई मर्नबाट जोगाएर यसरि न्याय दिलाउने.. हेर्नुहोस बिबरण सहित
आयो मनै रुवाउँने ओलीको यस्तो संदेश ! प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै दिए जनतालाई खुशी !! भिडियो सहित
अशोकको चर्चाबारे बिबाद : टंक र रुपेश माथि किशोर र बिबेकको असन्तुष्टि, विस्तृतमा (भिडियो सहित)
झापामा ५ रुपयामा पेटभरी खाना खान पाइने,सुन्दा अचम्म लाग्नेछ,खाना खाने मान्छेको भिड यस्तो देखियो (भिडियो सहित)